Shiinaha B UFO Light warshad iyo soosaarayaasha | Liper
Iftiinka sare waxaa si weyn loogu isticmaalaa garoomada, dukaamada, bakhaarada iyo meelaha warshadaha. Meelahan oo dhami waxay leeyihiin muuqaal guud: Saqafku aad buu u sarreeyaa, ma fududa in la rakibo ama la beddelo. Haddii aad rabto inaad rakibto ama beddesho nalalka warshadaha, waxaa imanaya su'aal aad muhiim u ah: Sidee loo doortaa Led Light bay Light wanaagsan?
Dulqaadka, waxtarka tamarta, naqshadeynta wanaagsan, dhalaalka, waxay ku kacaysaa dhammaan qodobadan aad tixgelin doontid.
Lipper IP65 UFOs ayaa ku siin kara xal nalalka warshadaha wanaagsan si aad u buuxiso dhammaan shuruudahaan.
Naqshadaynta shatiga—Qaabka UFO oo leh qaboojiye dhammaantood hal naqshad, fudeyd iyo xarrago leh, ayaa aad ugu gaar ah suuqa. Anigu waxaan ahay qaab gaar ah, ma awoodid inaad si sax ah uga hesho suuqa.
Cimri dherer—Dhimashada tuubada kuleylka ee aluminium ee leh baalalka qaboojinta ayaa xaqiijinaya kuleylka kuleylka wanaagsan. Marka aan sameyneyno baaritaanka gabowga heerkulka sare, waxaan sidoo kale sameynaa ogaanshaha heerkulka qaybta muhiimka ah ee laambadda, sida jibbada laydhka loo yaqaan 'induction', inductance, mosfet, body lamp. Lipper LED UFO nalalka ayaa leh daahan ka hortagga daxalka oo dhaafi kara 24 saac tijaabada buufiska cusbada. Heerkulka iftiinka wanaagsan ee la kontaroolo iyo rinjiyeynta ka hortagga daxalka ayaa damaanad qaadaya cimriga dheer (30000 Hrs.).
Waxtarka tamarta iyo dhalaalka—100W iyo 200W laba nooc ayaa la heli karaa. Nalalkaani waxay ku shaqeeyaan tamar-hufnaan dhan 100lm / w sida ku cad xogta baaritaanka qolkayaga mugdiga ah. Marka la barbardhigo iftiin dhaqameedkii hore wuxuu keydin karaa tamar ilaa 70%.
Ilaalinta IP—Nalalkayaga UFO ee nalalka ayaa hogaaminaya waxay gaari karaan IP65 oo ay tijaabiyeen mashiinka tijaabada biyaha aan caadiga ahayn ee ka hooseeya xaalad kulul 24 saac.
Saamaynta Iftiinka—High CRI iyo R9> 0 (oo lagu tijaabiyay isku-darka wareega) ayaa ka dhigi kara mawduuca hoosta iftiinka midab badan oo muujinaya midabka runta ah. Astaantan, Lipper UFOs ayaa ku isticmaali kara dukaamada waaweyn, makhaayada si ay uga caawiso muujinta alaabtu inay noqdaan kuwo soo jiidasho leh.
Intaasina kuma eka! Lipper UFOs waa CE iyo Rosh-shahaado waxayna la yimaadeen dammaanad 3-sano ah. Way fududahay in la maareeyo, la rakibo lana ilaaliyo. Waxaan sidoo kale u soo bandhignaa faylka IES ee loogu talagalay macaamiisha sameynaya mashruuca si aad ugu ekeysiiso jawiga nalalka dhabta ah ee mashruuca.
Hore: E Nalka Korantada
Xiga: Xagasha hagaajin karo E Track Light
Daboolka High Bay Light
Qalabka Bay Light High Bay
Nalalka Laydhka Ufo 100w